ह्युण्डाइका विजेतालाई कार हस्तान्तरण | गृहपृष्ठ
Home बजार ह्युण्डाइका विजेतालाई कार हस्तान्तरण
पुस ७, काठमाडौं (अस)। नेपालका लागि ह्युण्डाइको आधिकारिक विक्रेता लक्ष्मी इण्टर कण्टिनेण्टलले तीनजना बम्पर उपहार विजेतालाई पुरस्कृत गरेको छ । कम्पनीले दशैंतिहारको अवसर पारेर ‘दशैंतिहारको बेला ह्युण्डाइको उपहार मेला’ नामक योजना ल्याएको थियो । १३ सेप्टेम्बर २०१० देखि ४ नोभेम्बर २०१० सम्म लागू गरिएको सो योजनामा सहभागी भई ललितपुरका मित्रबन्धु पौडेल, काभ्रे बनेपाका अमरनाथ बादे श्रेष्ठ तथा कास्की पोखराका जीवननाथ सापकोटा लक्की ड्रमार्फत विजेता भएका हुन् । उनीहरूले क्रमशः स्याण्ट्रो जीएलएस, आई १० म्याग्ना र आई २० अस्था कार जितेका छन् ।
गत मङ्सिर २१ गते विजेता घोषित गरिएका उनीहरूलाई बुधवार कम्पनीका अध्यक्ष गणेशबहादुर श्रेष्ठले गाडीको साँचो हस्तान्तरण गरी पुरस्कृत गरेका हुन् । पुरस्कार वितरणपछि प्रतिक्रिया दिँदै कम्पनीले गुणस्तरीय सामान, सेवा र ग्राहकको सन्तुष्टिलाई सधैं प्राथमिकतामा पारेको उनले बताए । यसबाट कम्पनीप्रति ग्राहकको विश्वास अझै बढ्ने उनको विश्वास थियो ।
आई २० अस्थाका विजेता जीवनाथ सापकोटाले यो पुरस्कार पाउँदा कम्पनीले ग्राहकको मन जितेको र विश्वसनीयता बढेको अनुभूति गरेको प्रतिक्रिया दिए । उनले आफूलाई उपहार र भाग्यमा कमै विश्वास लागे पनि अब भने विश्वास गर्न बाध्य भएको बताए । त्यसरी नै आई १० म्याग्नाका विजेता अमरनाथ बाले श्रेष्ठले यस प्रकारको उपहारले गर्दा कम्पनीप्रतिको विश्वास बढेको प्रतिक्रिया दिए । अर्का स्याण्ट्रो जीएलएस विजेता मित्रबन्धु पौडेलले कम्पनीले आफ्नो प्रतिबद्धता पूरा गरेकोमा खुशी व्यक्त गरे । आई २० अस्थाको मूल्य रू. २६ लाख ५५ हजार, आई १० म्याग्नाको रू. १९ लाख ३५ हजार र स्याण्ट्रो जीएलएसको मूल्य रू. १७ लाख ३५ हजार रहेको छ ।
कम्पनीले यस योजनाअन्तर्गत कार्ड स्क्र्याचमार्फ प्रत्येक ह्युण्डाइ गाडीका खरीदकर्तालाई एचपी ल्यापटप, सामसुङको ग्यालेक्सी मोबाइल फोन, १ वर्षको बीमा तथा निःशुल्क नामसारीको व्यवस्था गरेको थियो भने लक्की ड्रमार्फ बम्पर उपहारस्वरूप तीनओटा गाडी उपहारमा राखेको थियो । योजना अवधिभरमा ४ सय ३३ ओटा कार विक्री भएको कम्पनीले जानकारी दिएको छ ।
अक्टोबरदेखि चेकको स्वचालित क्लियरिङ
पुस ७,काठमाडौँ (अस)। स्वचालित प्रविधिबाट चेक क्लियरिङ सेवा सञ्चालनका लागि सफ्टवेयर जडान गर्ने सम्बन्धमा नेपाल क्लियरिङ हाउस लिमिटेड र जोर्डनको प्रोग्रेस सफ्ट कर्पोरेशनबीच सम्झौता भएको छ । उक्त सम्झौता पत्रमा नेपाल क्लियरिङ हाउसका तर्फाट प्रबन्ध सञ्चालक रवीन्द्रबहादुर मल्ल तथा प्रोग्रेससफ्ट कर्पोरेशनका तर्फबाट प्रमुख कार्यकारी अधिकृत माइकल जे वाकिलेहले बुधवार राजधानीमा आयोजित एक कार्यक्रमबीच हस्ताक्षर गरे ।
स्वचालित प्रविधिबाट चेक क्लियरिङ सेवा सञ्चालनमा आएपछि हाल म्यानुअल रूपमा हुँदै आएको भौतिक चेक लेनदेनको सट्टा विद्युतीय प्रणालीमार्फत कारोबार हुन सक्ने छ । यसले हाल चेक क्लियरिङ गर्दा लाग्दै आएको १ देखि ३ दिनसम्मको समयको सट्टा चेक जम्मा भएकै दिन रकम प्राप्त गर्न सकिनेछ । यससबाट क्लियरिङको कार्य छिटो र सहज भई चेकमार्फत कारोबार गर्न सेवाग्राही प्रोत्साहित हुने कम्पनीको अपेक्षा छ ।
दुइ कम्पनीबीच सम्झौता भएपछि एकदुइ हप्तामै सफ्टवेयर जडान कार्य शुरू गरिने नेपाल क्लियरिङ हाउस लिमिटेडका अध्यक्ष सुमन जोशीले जानकारी दिए । सकेसम्म चालू आवमा आवश्यक प्रक्रिया सम्पन्न गरी आगामी आवदेखि यसलाई सञ्चालनमा ल्याउनका लागि गरिने उनले जानकारी दिए । यसका निम्ति राष्ट्र बैङ्कको तत्परता बढी आवश्यक पर्ने उनको भनाइ छ ।
नेपाल क्लियरिङ हाउस लिमिटेड नेपाल बैङ्कर्स एशोसिएशनको अग्रसरतामा विभिन्न बैङ्क, नेपाल राष्ट्र बैङ्क तथा निजी क्षेत्रका कार्ड स्विच सेवा सञ्चालक स्मार्ट च्वाइस टेक्नोलोजिज (एससीटी)समेतको लगानीमा स्थापना भएको कम्पनी हो । त्यसैगरी प्रोगे्रससफ्ट कर्पोरेशन सन् १९८९ देखि सञ्चालनमा आएको कम्पनी हो, जसले जोर्डन, कतार ओमनलगायत देशमा विद्युतीय चेक क्लियरिङको कार्यान्वयन गर्दै आएको बताइएको छ ।
स्वदेशी ब्राण्डको छाप बसाल्दै नेपाली छाला जुत्ता
पुस ७, काठमाडौं । केही वर्षअघि नेपाली ब्राण्डबाट नाम राख्दा जुत्ता विक्री हुँदैन कि भनेर डराउने जुत्ता उद्योगीहरू हाल आफ्नो नामको ब्राण्डप्रति गर्व गर्न थालेका छन् । राजधानीमा सोमवारबाट शुरू भएको छाला वस्तु तथा जुत्ता-चप्पलहरूको सातौं राष्ट्रिय औद्योगिक प्रदर्शनीमा उपभोक्ताले देखाएको उत्साहपूर्ण चासाका कारण नेपाली ब्राण्डका जुत्ताको लोकप्रियता बढेको मात्र नभई यसले भविष्यमा विदेशी ब्राण्डका जुत्तासमेत विस्थापित गर्छ भन्ने व्यवसायीको धारणा छ । पहिलो तीन दिनमा नै ३५ हजार भन्दा बढीले प्रदर्शनी अवलोकन गरेपछि व्यवसायीमा थप उत्साह आएको हो । ‘प्रदर्शनी अवलोकनका लागि आएका उपभोक्ताले नेपाली ब्राण्डका जुत्ताप्रति देखाएको चासोबाट हामी निकै प्रभावित भएका छौं’, छाला जुत्ता तथा वस्तु उत्पादक सङ्घ नेपालका उपाध्यक्ष होमनाथ उपाध्यायले भने, ‘कति उपभोक्ताले प्रदर्शनीस्थलबाटै जुत्ता- चप्पल किनेर लैजानुभएको छ त कतिले जुत्ता उत्पादनका बारेमा उत्सुकतापूर्वक सोधखोज गर्नुभएको छ ।’
आगामी ११ गतेसम्म चल्ने सो प्रदर्शनीले शुरूका तीन दिनमा राम्रै व्यापार गरेको व्यवसायीले बताएका छन् । ‘तीन दिनमा हामीले ५ सय भन्दा बढी जोर जुत्ता बेच्यौं,’ फिट राइटका नवराज पोखरेलले भने, ‘नेपाली ब्राण्डका जुत्ताहरूको बजार प्रवर्द्धनका लागि प्रदर्शनी निकै उपलब्धिपूर्ण भएको छ ।’ उनले प्रदर्शनीमा ३ हजार जोर जुत्ता बेच्ने लक्ष्य लिएको जानकारी दिए ।
प्रदर्शनीमा छूट मूल्यमा नेपाली ब्राण्डका जुत्ता-चप्पलहरू विक्री गरिएका कारण पनि ग्राहकको आकर्षण बढेको बताइएको छ । ५० स्टलमध्ये जुत्ता-चप्पलका मात्रै ४३ स्टल रहेको सो प्रदर्शनीमा जुत्ता चप्पलको मूल्यमा १० देखि ५० प्रतिशतसम्म छूट दिइएको छ । फिट राइट जुत्ताको स्टलमा जुत्ता छानिरहेका इमाडोलका प्रल्हाद दाहाललाई प्रदर्शनीमा नै जुत्ता लिनुको कारणबारे सोध्दा उनले छूट मूल्यका कारण आफूले प्रदर्शनीमा आएर जुत्ता किनेको बताए । उनले भने,’ जाडोमा जुत्ता किन्नुपर्छ । अहिले प्रदर्शनीमा ५० प्रतिशतसम्म छूट दिएको बेलामा किन नकिन्ने भनेर मैले किनेको हुँ। ‘
शिखर शूका शिव भट्टराईले यसपालीको प्रदर्शनीका शुरूका तीन दिनमा नै ३ लाख रुपैयाँ बराबरको जुत्ता बेचेको बताए । उनले भने, ‘उपभोक्ताको बढ्दो आकर्षण देख्दा यस प्रदर्शनीमा १२ लाख रूपैयाँबराबरको कारोबार होला भन्ने हाम्रो अपेक्षा छ ।’ शिखर शूले प्रदान गर्दै आएको स्क्रयाच कुपनमा सो प्रदर्शनीको अवसर पारेर स्क्रयाच कुपनमा परेको रकममा थप १ सय रुपैयाँ छूट दिएको छ । शिखरको कुपन स्क्रयाच गर्दा उपभोक्ताले ५० देखि १ लाख रुपैयाँसम्म पाउने कम्पनीले बताउँदै आएको छ ।
स्काई शूका मनोज श्रेष्ठले पनि प्रदर्शनीको शुरूका तीन दिनमा २ सय ५० भन्दा बढी जोर जुत्ता बेचेको जानकारी दिए । उनले भने, ‘जुत्ता कति विक्री भयो भन्ने भन्दा पनि प्रदर्शनीबाट आफ्नो ब्राण्डको जुत्ताका बारेमा कति उपभोक्ताले थाहा पाए भन्ने कुरा महत्वपूर्ण हो ।’ यस प्रकारका प्रदर्शनीले नेपाली ब्राण्डका जुत्ताहरूको प्रचारप्रसारका लागि महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने उनको भनाइ छ ।
हिलाइफ ब्राण्डका प्यु चप्पल बुधवारसम्म २ सय जोर विक्री भएको हिलाइफ ब्राण्डका विनय चौधरीले जानकारी दिए । यसप्रकारको प्रदर्शनीमा आफ्नो पहिलो सहभागिता भएको बताउँदै उनले सो प्रदर्शनीबाट हिलाइफ ब्राण्डको बारेमा धेरैले थाहा पाएको बताए । प्रदर्शनी अवधिभर १ हजार ५ सय जोर चप्पल बेच्ने उनको योजना छ । हिलाइफ स्टलमा ग्राहकले १५ प्रतिशतसम्म छूट पाउने उनले जानकारी दिए । प्रदर्शनीमा करीब १ लाखले अवलोकन गर्ने आयोजकको अपेक्षा छ ।
नबिलको वीरगञ्ज पावरहाउस शाखामा एटीएम
नबिल बैङ्कले वीरगञ्जस्थित पावरहाउस शाखाबाट एटीएम सेवा शुरू गरेको छ । उक्त एटीएमको बैङ्कका वरिष्ठ जनसम्पर्क अधिकृत ज्ञानेश्वर आचार्यले उद्घाटन गरे । बैङ्कको यो ६०औं एटीएम हो । सो अवसरमा बोल्दै उनले भविष्यमा पनि ग्राहकलाई र्सवसुलभ रूपमा यो सेवा विस्तार गर्दै लाने लक्ष्य रहेको जानकारी दिए । बैङ्कका हाल ४२ शाखा छन् । बैङ्कले वीरगञ्जकै आदर्शनगर, माईस्थान र पावरहाउस चोकमा गरी तीन स्थानमा एटीएम जडान गरेको छ ।
जनता बैङ्कको शाखा वीरगञ्जमा
जनता बैङ्कले वीरगञ्जमा शाखा खोलेको छ । बैङ्कको यो पाँचौँ शाखा हो । उक्त शाखाको बैङ्कका वीरगञ्ज शाखा प्रबन्धक क्षितिज खड्काले बुधवार उद्घाटन गरे । सो अवसरमा बैङ्कका सञ्चालक गुरुप्रसाद घिमिरे तथा प्रमुख कार्यकारी अधिकृत विजय पन्त पनि उपस्थित थिए । बैङ्कले चालू आवभित्रै सिन्धुपाल्चोकको चौतारा, रौतहटको गौर, ताप्लेजुङको फुङ्लिङ, झापाको विर्तामोड र सुनसरीको इनरुवामा शाखा खोल्ने जानकारी दिएको छ ।
चुक्ता पूँजी बढाउँदै स्वस्तिक मर्चेण्ट
स्वस्तिक मर्चेण्ट फाइनान्स कम्पनीको तेस्रो साधारणसभा बुधवार राजधानीमा सम्पन्न भयो । सो सभाले हाल रहेको रू. ७ करोडको चुक्ता पूँजी वृद्धि गरी रू. २० करोड पुर्‍याउने प्रस्ताव पारित गरेको छ । सभाले १ बराबर १ का दरले हकप्रद शेयर जारी गर्ने सञ्चालक समितिको प्रस्ताव समेत पारित गरेको छ ।
सो अवसरमा प्रतिवेदन प्रस्तुत गर्दै कम्पनीका अध्यक्ष इमानसिंह लामाले कम्पनीले यसै वर्षभत्र एटीएम तथा अनलाइन बैङ्किङ सेवा सञ्चालनमा ल्याउन लागेको जानकारी दिए । कम्पनीले गत आवमा रू. ९० लाख ६२ हजार खुद नाफा गरेको थियो ।
कास्की फाइनान्सको १८ प्रतिशत नगद लाभांश
पोखराको न्यूरोडमा केन्द्रीय कार्यालय रहेको कास्की फाइनान्सले शेयरधनीलाई हाल कायम चुक्ता पूँजीको १८ प्रतिशत नगद लाभांश दिने निर्णय गरेको छ । उक्त लाभांश रकम कम्पनीको आगामी पुस २१ गते हुने चौँथो वार्षिक साधारण सभाबाट पारित भए पश्चात वितरण गर्ने कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत तोयराज अधिकारीले वताए । कम्पनीले यसै आर्थिक वर्ष काठमाडौंमा एक र उपत्यकाबाहिर एक शाखा खोल्ने बताएको छ । कम्पनीले गत अघिल्लो आवको तुलनामा गत आवमा निक्षेपमा ३२ दशमलव १८ प्रतिशत र कर्जा तथा सापटीतर्फ२९ दशमलव शुन्य ३ प्रतिशतले वृद्धि गरेको जानकारी दिएको छ ।
कम्पनीले गत आवमा सञ्चालन नाफामा अघिल्लो वर्षको तुलनामा १ सय ७२ दशमलव ५५ प्रतिशतले वृध्दी गरेको बताएको छ । कम्पनीले गत आवमा रू.४ करोड ४१ लाख ८८ हजार सञ्चालन नाफा गरेको थियो । कम्पनीको चालू आवको पहिलो त्रैमासको अन्त्यमा रू. १ अर्ब ७ करोड निक्षेप सङ्कलनका साथै रू. ९४ करोड भन्दा बढी कर्जा लगानी रहेको थियो । कम्पनीले प्रथम त्रैमासमा रू.९० लाख सञ्चालन नाफा गरेको ताएको छ ।
तनहुँ महोत्सव १ दिन सर्‍यो
यही पुस २३ गतदेखि शुरू हुने भनिएको तेस्रो तनहुँ महोत्सव तथा पश्चिमाञ्चल औद्योगिक व्यापार मेलाको मिति परिवर्तन भएको छ । मङ्गलवार बसेको महोत्सव निर्णायक समितिको बैठकले ‘विशेष कारण’ भन्दै पुस २३को सट्टा २४ गतेबाट महोत्सव गर्ने निर्णय गरेको हो । सो महोत्सव माघ ३ गतेसम्म चल्ने भएको छ । तनहुँ उद्योग वाणिज्य सङ्घका अध्यक्ष एवम् महोत्सव निर्णायक समितिका संयोजक मोहनकुमार विकले महोत्सव शुरू हुने दिन सर्नुमा आन्तरिक कारण भएको जानकारी दिए ।
महोत्सव व्यवस्थापनको तयारी द्रुत गतिमा चलिरहेको उनले बताए । उनका अनुसार हाल महोत्सवका लागि स्टल बुकिङ, प्रचारप्रसार, व्यवस्थापनलगायतका काम चलिरहेको छ । यसपटकको महोत्सवसँगै पश्चिमाञ्चल औद्योगिक व्यापारमेला समेत रहेकाले तयारीमा अझ बढी मिहेनत गरिएको उनले बताए । महोत्सव सचिवालयका सदस्य एवम् तनहुँ उद्योग वाणिज्य सङ्घका कार्यकारी अधिकृत विश्वेश्वर तिमिल्सेनाले महोत्सवको समय नजिकै आएकाले यसको तयारी पनि तीव्र गतिमा भैरहेको जानकारी दिए ।
चिमेइका एलसीडी मनिटर बजारमा
सागर इन्फोसिसले चिमेइका एलसीडी मनिटर बजारमा ल्याएको छ । कम्पनीले यस ब्राण्डका एलईडी, एलसीडी मनिटर तथा डिजिटल टेलिभिजन बजारमा ल्याएको हो । १६ देखि ५५ इञ्चसम्मका यी मनिटरहरू रू. ७ हजार ७ सयदेखि रू. २ लाख ४९ हजारसम्ममा उपलब्ध छन् । ताइवानको यस ब्राण्डको आकर्षक डिजाइन तथा प्रविधिको कारण जर्मनको आईएफ डजाइन अवार्ड, रेड डट डिजाइन अवार्ड र ताइवानको एक्सिलेन्स अवार्ड प्राप्त गरिसकेको कम्पनीले जानकारी दिएको छ ।
सागर इन्फोसिसका प्रबन्ध निर्देशक वासुदेव लाखेले एलसीडी मनिटरमा ३ वर्षको वारेण्टी रहेको जानकारी दिए । यो उत्पादन कम्पनीका २ सय ५० भन्दा बढी विक्रेतामार्फत नेपालभर उपलब्ध हुने उनले जानकारी दिए । इन्फोसिसले ब्रदरका प्रिण्टर, क्यास्परिस्की एण्टी भाइरस, फोटोकपी, प्रोजेक्टरलयायतका विभिन्न विद्युतीय सामग्री विक्री गर्दै आएको छ ।
यामाहा जेनेरेटरमा उपहार योजना
नेपालका लागि यामाहाको अधिकृत विक्रेता मोरङ अटो वर्क्सले यामाहा जेनेरेटरको साथमा मोबाइल उपहार योजना ल्याएको छ । यसमा एक केभीएदेखि चार केभीएसम्मका जेनेरेटर खरीदमा डबल सिमसहितको नोकिया मोबाइल सेट उपहार दिइने बताइएको छ । ५ केभीएदेखि माथिका जेनेरेटरको खरीदमा ग्राहकले एलजी ब्राण्डका भ्याकुम क्लिनर उपहार प्राप्त गर्ने कम्पनीले जनाएको छ । यो उपहार योजना पुस ७ गतेदेखि ३० गतेसम्म स्टक रहुञ्जेल मात्र लागू हुने बताइएको छ ।
सीटी सेण्टरमा कुकी म्यान, अल्वेज हङ्ग्री
राजधानीको सीटी सेण्टरमा क्रिसमसको अवसर पारेर कुकी म्यान र अल्वेज हङ्ग्री शप सञ्चालनमा आएका छन् । मेघा सङ्र्घाई र पुल्कित भिमसरियाले बिहीवारबाट सो पसल सञ्चालनमा ल्याएका हुन् । कच्चा पदार्थबाट सबैले देख्नेगरी तत्काल कुकिज बनाइने भएकाले कुकिज बन्ने प्रक्रियाका बारेमा धेरैलै सिक्ने अवसरसमेत पाउने सञ्चालक पुल्कित भिमसरियाले बताए । सो पसलमा क्रिसमसको उपलक्ष्यमा कुकिज किन्दा बालबालिकाले क्रिसमससँग सम्बन्धित थुप्रै सामान उपहारस्वरूप पाउने उनले जानकारी दिए । अल्वेज हङ्ग्री शपमा कफी, चक्लेट, आइस क्रिमजस्ता सामानहरू राखिएको छ । सञ्चालकहरूले व्यापारबाट जम्मा भएको केही रकम तीनकुनेस्थित कोशेली स्कूलका विद्यार्थीका लागि खर्च गर्ने बताएका छन् ।
विमान दुर्घटनाप्रति नाट्टाद्वारा दुःख व्यक्त
नेपाल एशोसिएशन अफ टुर एण्ड ट्राभल एजेण्ट्स (नाट्टा)ले आफ्नो सदस्य कम्पनी ट्राभल लाइट प्रालि तारा एयरलाइन्सको टिकट विक्रेताका रूपमा रहेकोमा दुःख व्यक्त गरेको छ । लामिडाँडाबाट काठमाडौं आइरहेको तारा एयरको दुःखद् दुर्घटनाप्रति नाट्टाले आफ् नो ध्यानाकर्षण भएको बताएको छ । नाट्टाले भविष्यमा यस प्रकारका दुःखद् दुर्घटनाहरू पुनः नदोहो रऊन् भन्ने हेतुले सरकारका तर्फबाट हवाई सुरक्षातर्फ विशेष ध्यान पुर्‍याउनुपर्नेमा जोड दिएको छ । साथै विमान स्थलको चेक-इन काउण्टरमा समेत यात्रुको टिकट र परिचयपत्र रुजु गरिनुपर्ने कानूनी व्यवस्थालाई कडाइका साथ लागू गर्न सम्पूर्ण सम्बन्धित निकायहरूलाई अपिल गरेको छ । नाट्टाले आफ्ना सदस्यहरूमा पनि टिकट विक्री गर्दा सचेतता अपनाउन र यस प्रकारका गल्ती नदोहोर्‍याउन आग्रहसमेत गरेको छ ।
गोरखाका दुइ पदमार्ग सार्वजनिक
गोरखाको पर्यटकीय विकासका लागि धार्चे हिल र गोरखा रोयल ट्रेकिङ रुट सार्वजनिक गरिएको छ । समितिले १० दिने गोरखा हिल ट्रायल ट्रेकिङ र चारदिने गोरखा रोयल ट्रेकिङका पदमार्गको प्याकेजसमेत सार्वजनिक गरेको छ । बुधवार राजधानीमा भएको एक कार्यक्रममा गोरखाको पर्यटन विकासका लागि हरेक वर्ष आउने बजेट कार्यान्वयन हुन नसक्दा यहाँको पर्यटनले गति लिन नसकेको धार्चे मनास्लु पर्यटन विकास समितिका अध्यक्ष साने गुरुङले गुनासो गरे ।
पर्यटकीय दृष्टिले गोर्खाका पारपाक, मनास्लु, धार्चेलगायतका गन्तव्यमा पर्यटक पुर्‍याउनका लागि धार्चे मनास्लु पर्यटन विकास समितिले पदयात्रा मार्गको समेत पहिचान गरेको छ । गुरुङले गोरखाको पर्यटन विकासकै लागि समितिले गत फागुनमा एक सातासम्म गोरखाको पदयात्रा गरी नयाँ पर्यटकीय मार्ग प्रयोगमा ल्याउन सकिने बताएको छ । सो अवसरमा गोरखाको पर्यटकीय गन्तव्यको सीडी तथा पुस्तकसमेत सार्वजनिक गरिएको थियो । पुस्तक सार्वजनिक गर्दे पूर्वअर्थमन्त्री बाबुराम भट्टराईले पर्यटकीय विकासको लागि पहिले पूर्वाधारको विकास हुनुपर्ने बताए । उनले गोरखामा पर्यटक लैजान सकिने प्रशस्त सम्भावना भएर पनि यसको प्रवर्द्धन नहुँदा पर्यटक पुग्न नसकेकाले स्थानीयकै सक्रियतामा पर्यटनको विकास गराउनु जरूरी भएको बताए ।